”Somalia mar bay si sahlan nagu qabsan kartey iskamana difaaci karin!” – Saxaafadda Kenya oo qaadaa dhigaysa Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Somalia mar bay si sahlan nagu qabsan kartey iskamana difaaci karin!” –...
”Somalia mar bay si sahlan nagu qabsan kartey iskamana difaaci karin!” – Saxaafadda Kenya oo qaadaa dhigaysa Somalia
(Nairobi) 16 Okt 2021 – Maqaal warxumo ah oo uu The Nation ku qoray Matuma Mathiu ayaa lagu soo qaaday arrin uu nuxurkeedu yahay in Kenya ay diiddo go’aanka Maxkamadda ICJ, ayaa sidoo kale Somalia lagu sheegay dal aan wax abaal ah abid u gelin Kenya.
”Haddii aan daacad hadlo, runtii ma jecli in DF Somalia deris ahaan ay noqoto cadowga iigu daran,” ayaa Qoraalka ayaa lagu bilaabay iyadoo uu qoruhu kaddib taxay in Somalia aysan abid ka bixin nolol ku dhisan qas iyo qalaanqal, rabsho iyo muran aan dhamaad lahayd oo keena inay dersaanta u caariyaan.
Tanzania, Madaxdoodii Jakaya Kikwete iyo Ben Mkapa, waxay naga caawiyeen inuu dalkeennu ka badbaado rabshadihii xigey doorashadii 2008-dii. Itoobiya, oo aannu heshiis amaan kula jirney, waxay na difaacdey xilli aynaan Somalia iska difaaci karneen Dagaalkii Qabobaa. MW Yoweri Museveni-ga Uganda hadallo wanaagsan ayuu sheegaa maalmaha waawayn.
”Kama fikiri karo hal wax oo wanaagsan oo ay abid na tareen.” ayuu raaciyey.
Wuxuu qoray in uu kaliya tixi karo kun dhibaato oo Kenya uga timi dhanka Somalia kaddib dhicitaankii nidaamkii dhexe, isagoo soo qaatay 150-kii arday ee lagu laayey Jaamacadda Gaarisa, (waloow aysan taasi ahayn wax ay Somalia, oo iyaduba dhibkaa qabta, ay raalli ka ahayd).
Wuxuu intaa ku daran in siyaasadda Somalia, ay Kenya ka dhigatay wax dadka lagu cabsiiyo, oo markii uu hoggaamiye doonayo inuu umadda mideeyo uu Kenya ku tilmaamo sidii bahal cuni doona iyo dad xun.
Wuxuu maqaalka kusoo afjaray gunaanad uu kusoo qaatay warka nin naagtiisa khiyaanay ee misna yiri ‘heblo ayaan la socdaaye maxaad qaadi kartaa” oo uu nuxurkiisu yahay in Somalia aan weji laga yeelan oo la yiraahdo ”go’aankii ICJ waa diidney e wixii aad qaadi kartaan qaada.”
Previous articleMaxaadan ogayn oo ay ku keceen camaaliqooyinka tiknolojiyadda ee Google & Amazon?!!
Next article”Waa ‘qoraal sharci darro’ ah!!” – Shiinaha oo markale weerar cad ku qaaday diinta Islaamka (Muxuu sameeyey?)